बिना गन्तव्यको सात घन्टे जहाज उडानका सबै टिकट दस मिनेटमै बिके ! «
बिना गन्तव्यको सात घन्टे जहाज उडानका सबै टिकट दस मिनेटमै बिके !
प्रकाशित मिति : 19 September, 2020 1:55 pm
को’रोना महामा’रीले संसारलाई नयाँ जीवनशैली र गतिविधितिर धकेलेको छ। मान्छेहरू घर र निश्चित ठाउँमा मात्र थुनिएका कारण उकुसमुकस भइसकेका छन्। केही मान्छे कतिसम्म गुम्सिएका छन् भन्ने एउटा उदाहरण अस्ट्रेलियामा देखिएको छ। अस्ट्रेलियामा करिब सात महिनादेखि उडानहरू भएका छैनन्। मान्छेहरू जहाजमा यात्रा गर्न पाएका छैनन्। पाइलट र जहाज कर्मचारी पनि उडान भर्न आतुर छन्।
अस्ट्रेलियाको कान्टास एयरलाइन्सले यसको उपाय निकालेको छ- सात घन्टा उडान गर्ने तर कहीँ पनि नपुग्ने ! हो, कान्टासले आगामी अक्टोबर १० मा सात घन्टे उडानको तयारी गरेको छ। सिएनएनका अनुसार यो उडानको कुनै गन्तव्य छैन। सिड्नी विमानस्थलबाट उड्ने यो जहाज सात घन्टासम्म यसै आकाशमा उडिनै रहनेछ। र समय सकिएपछि फर्किनेछ।
अब भन्नुहोला, बिना गन्तव्यको जहाजमा को जाला ? यो सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं गलत हुनुभयो। किनकी यो उडानको बुकिङ खुला भएको १० मिनेटमै सबै टिकट बिकिसकेको एयरलाइन्सले जनाएको छ। ‘कान्टास एयरलाइन्सको इतिहासमै यो सबभन्दा चाँडो टिकट बिकेको उडान हो,’ एयरलाइन्सका सिइओ अलान जोयसका भनाइ उद्धृत गर्दै सिएनएनले लेखेको छ।
उनले थप भनेका छन्, ‘मान्छेहरूले उडान मिस गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई उडानको महशुस गर्न हतार भएको छ भलै जहाज कहीँ अवतरण नहोस्। झ्यालबाट अनुभव मात्र गर्न भए पनि मान्छे आतुर छन्। यसखाले उडानको थप माग भए हामी यसका लागि अझै पहल गर्नेछौं।’ सिएनएनका अनुसार जहाज यात्राका लागि मात्र तय भएको यो उडान क्वीन्स ल्यान्ड, गोल्ड कोस्ट, न्यु साउथ वेल्स र केही ग्रामीण भेगका आकाशमा हुनेछ। कान्टास बोइङ ७८७ ड्रिमलाइन्स जहाजले गर्ने यो उडानका लागि ५६६ देखि २ हजार ७३४ अमेरिकी डलरसम्मका टिकट थिए। यो उडानका लागि तय भएका १३४ वटा टिकट १० मिनेटमै बिक्री भएको एयरलाइन्सले जनाएको छ।